पत्रिका, साहित्य र इतिहास
असार १२, २०७४ अभि सुवेदी
साहित्यिक पत्रिका र राज्य शक्तिबीचको सम्बन्ध दुई किसिमको हुन्छ । एउटा सहज हुन्छ जसमा राज्यले ती पत्रिकाबाट जन्मिने साहित्य र विचारलाई राष्ट्रिय लोकतान्त्रिक पाराको संस्कृतिको अभ्यास मान्छ । प्रतिद्वन्द्वी मान्दैन ।
अर्को किसिमको राज्यशक्ति जसले लेखेका र बोलेका पाठहरूलाई करेली समातेर हाँकेको हुन्छ त्यसले साहित्यिक पत्रिकामाथि निगरानी राखेको हुन्छ । अधिनायकवादी राज्यको ‘हेजिमोनी’ हो त्यो । शासन गर्नेले पाठ चिन्छ, साहित्य चिन्छ, त्यसको शक्ति चिन्छ । त्यसैले त्यसको दमन गर्छ । यस विषयमा निकै विचारकहरू र लेखकले छलफल गरिसकेका छन् । नेपालमा राणातन्त्रका बेला साहित्यिक पत्रिका चलाउन नपाउनुको कारण त्यही थियो । कम्युनिस्ट देशमा साहित्यिक पत्रिकामाथि त्यस्तै दृष्टि हुन्छ । पुँजीवादी, तथाकथित प्रजातान्त्रिक मुलुक अमेरिकामा पनि साहित्यिक पत्रिकाले के छाप्छन् भनेर निगरानी र प्रतिबन्ध गरेका कथा छन् । फेरि, ज्ञान र पाठ के ठीक हो, के उपभोग गर्न पाइन्छ भनेर नियन्त्रण गर्ने वा हेजिमोनी गर्नेहरूसँग कुनै न कुनै किसिमले कामचलाउ सम्बन्ध राख्न साहित्यिकहरू नै लागिपर्छन् । १९९१ सालको श्रीपञ्चमीदेखि प्रकाशित ‘शारदा’ साहित्यिक पत्रिकाका कथा शक्ति, शासक र राजनीतिसँग त्यसरी नै जोडिन्छन् । यो पत्रिका आरम्भ गर्न जुद्धशमशेरलाई मनाउनुपरेका कठिनाइका वर्णन छन् । नेपालमा आएका एक जना अङ्ग्रेजतिर देखाई धेरै पत्रिका निकाल्न दिएर ब्रिटिसले गल्ती गरेजस्तो गर्नु हुँदैन भन्ने उनको भनाइ उद्धृत गर्दै जुद्धले पत्रिका ननिकाल्न दिएको सल्लाहका प्रसङ्ग छन् ।
दुई वर्षपछि काशीबहादुर श्रेष्ठले बनारसबाट ‘उदय’ पत्रिका निकाले । राणाकालको अन्त्यतिर दार्जिलिङबाट पारसमणिको सम्पादन र प्रकाशनमा ‘भारती’ (२००६) निस्किनुलाई शक्ति र सिर्जनाको इतिहाससँग जोडेर अध्ययन हुँदा धेरै कुरा बुझिन्छन् । ‘शारदा’ पत्रिका साहित्यिक हुनुको अर्थ वाचाल थियो । नेपाली सिर्जनशील चिन्ता हुनेहरूले जुद्धसँग गरेको यो मौन सम्झौता थियो । राणाकालमा चलेका पत्रिकाहरू स्वतन्त्र थिएनन् तर तिनले प्रकाशित गरेका साहित्यिक कुरा र, साधारण नै भए पनि, विचारहरूको इतिहासमा स्थान हुन्छ । तिनको पनि अध्ययन हुनुपर्छ । ग्रीष्मबहादुर देवकोटाले लेखेको ‘नेपालको छापाखाना र पत्रपत्रिकाको इतिहास’ (२०२४) भन्ने ग्रन्थको भूमिकामा सूर्यविक्रम ज्ञवालीले लेखे, ‘अहिले नेपाली पत्रकारिताको इतिहास लेख्ने बेला भएको छैन ...नेपाली पत्रकारिता १९५० भन्दा पछिको शिशु हो ।’ ज्ञवाली शून्य आमवृत्तलाई सङ्केत गर्छन्, तर १९६० वैशाखमा प्रकाशित गोरखापत्रको तेस्रो अङ्कको सम्पादकीयमा लेखिएको छ, ‘अरू–अरू देशमा अखबारैबाट उन्नति भयाको देखेर हामीले पनि सोही देखाशि गरि यो गोर्खापत्र अखबार निकालेको... ।’ यो कुरा वाचाल छ । एउटा अमूर्त आमवृत्तलाई प्रेरणाको स्रोत मानेर, पाठको उपभोक्ता अज्ञात, मौन र अदृश्य भए पनि अखबारको धर्म परिभाषित गर्नु ‘जिरो ग्राउन्ड’ मै भए पनि ठूलो काम हो । ‘मधुपर्क’ को घरको इतिहास हो ।
बसुन्धराको एउटा अमूक थलोमा मधुपर्क साहित्यिक पत्रिकाले जेठ ३०, २०७४ मा आयोजना गरेको कार्यक्रम अभूतपूर्व थिएन । यो कार्यक्रम हुने पद्धतिकै सिसिसिलाभित्र थियो । सम्मान गर्ने र यसको स्वर्ण अङ्कको रूपमा अमूर्त संस्कृति विशेषाङ्क सार्वजनिक गरिने भनी आएको यो पत्रिकाका निकै समयदेखिका लगनशील सम्पादक र निबन्धकार श्रीओम श्रेष्ठ रोदनको निम्तोका आधारमा म पनि गएँ । त्यहाँ सम्मानित र सम्मान दिने सय पुग्नै लागेका सत्यमोहन जोशी र माधव घिमिरेले त्रियानब्बे वर्ष पुगेका श्यामदास वैष्णवलाई यो पत्रिकामा छापेको उत्कृष्ट कवितालाई भनेर पुरस्कार दिएको दृश्य ऐतिहासिक थियो । यी मानिसहरूले साहित्यिक पत्रिका र एकतन्त्री राणा शासनका बीचमा भएका अलिखित सम्झौतामा कस्ता पाठ कति छाप्न पाइन्छ भन्ने कुरा बुझेर ‘हेजिमोनी’ सँग सम्झौता गरेका थिए । मिसेल फुकोको पाठ हेजिमोनीको सिद्धान्त सम्झिन्छु । तर राणाहरूले नेपाली साहित्यका पाठलाई लिएर एकतन्त्री शासनमा कस्ता विचार राखे ? त्यो नेपालको इतिहास लेखनको एउटा अर्कै माध्यम हो, विषय हो ।
अर्को एउटा कुरा बिर्सिनु हुँदैन । नेपालमा अर्को विधामा लेख्ने राष्ट्रिय इतिहासकारहरूले साहित्यिक पाठ खोजिदिने, व्याख्या गरिदिने अनि साहित्यलाई कसरी लिनेजस्ता सूक्ष्म विषयमा काम गरेका छन् । नेपाली साहित्यको इतिहासको मानक बनाउने काम इतिहासकार बाबुराम आचार्यले नगरेका भए कुरा निकै फरक पर्ने थियो । त्यसैगरी इतिहासकार चित्तरञ्जन नेपालीले नेपाली कविहरू पत्ता लगाएर इतिहासमा तिनका व्याख्या गरे । बालचन्द्र शर्माले पनि त्यसै गरे । यी इतिहासकारहरूका आफ्ना–आफ्ना धारणा, शक्तिसँगका मौन सम्झौता कामको हिसाबले भए होलान् । हामी सहमत नहौंला । तर तिनले नेपाली साहित्यकार र समीक्षकहरूले भुल्न नहुने एउटा गुन लगाएका छन् । तिनीहरूले त्यो समयमा पनि राष्ट्रिय इतिहासको लेखनको क्रममा साहित्यलाई खोजिदिएर ल्याउनु भनेको कुराले साहित्य र शासकका हेजिमोनीको बीचमा हस्तक्षेप गर्नु र शासकलाई साहित्य ग्रहणयोग्य बनाइदिनु हो । आधुनिक समयमा आएर युवा पुस्ताका इतिहासकार डा. प्रत्यूष वन्तले साहित्यलाई लिएर फराकिलो आमवृत्तसम्म पुर्याएर संवाद गर्न सक्ने आधार खोजिदिएका छन् । वन्तले नेपाली साहित्यिक पाठका लेखक र उपभोक्तालाई आफ्नो भाषामा लेखिएको पाठबाटै आत्मविश्वाससाथ विश्वमा आफ्ना कुरा भन्नुको आधिकारिकता देखाउँदै आएका छन् । गायत्री स्पिभाक चक्रोवोर्ती जो नेपालमा प्राध्यापक अरुण गुप्तोले आफ्नो संस्था आएसरमा पटक–पटक बोलाउँदा नेपालमा परिचित भइसकेकी छन्, तिनले बङ्गाली लेखक महाश्वेता देवीका बङ्गाली कथालाई लिएर त्यही विषयको सामथ्र्यमाथि बलिया लेख लेखेको निकै वर्षदेखि हो ।
सम्पादक रोदन र सहायक सम्पादक तुल्सीहरि कोइरालाले पत्रिकाको छोटो इतिहास भने जसमा केही मिलेका केही नमिलेका इतिहासका सूचना प्रवाहित भए । महत्वपूर्ण काम गरेका सम्पादकहरूका नाम पनि भने । अरू केही नमिलेजस्तो लाग्ने सूचना पनि सुन्यौं । जस्तो कि मधुपर्क भन्ने नाम कसले जुरायो भन्ने कुरामा म र रोचक घिमिरे चकित परेका थियौं । बालकृष्ण समले आफूले साहित्यिक पत्रिकालाई महको भाँडो ठानेकाले आफूले ‘मधुपर्क’ नाम जुराएको अनि त्यो मिटिङमा उपस्थितहरूलाई मन परेको जस्ता कुरा पटक–पटक भनेका सम्झना छन् । मलाई खासै त्यसमा केही भन्नु छैन । अब यो कुरा रोचक घिमिरे र मलाई मात्र थाहा भएको देखिएकोले यसको अर्थ रहेन । ‘रचना’ पत्रिकाका सम्पादक र प्रकाशक यी घिमिरे पनि त्यहाँ उपस्थित हुनु साहित्यिक पत्रिकाले इतिहास मनाएको त्यो सुखद अवसरमा एउटा वाचाल उदाहरण थियो । रचनाको सय अङ्क, २०६५ को निम्ति मैले सबै अङ्क पढेर लेखेको लेख ‘रचनाका सय अङ्क : साहित्यिक युगहरूको प्रसङ्ग’ को पुछारमा यस्तो लेखेको रहेछु—
‘साहित्यको अध्ययनमा आएका परिवर्तनलाई आत्मसात् नगरी साहित्य अघि बढ्दैन भन्ने कुरा रचनाका सय अङ्कहरूको सन्देश हो । अर्को महत्वपूर्ण सन्देश रचना पत्रिकाको अस्मिता नै हो । आज बाहिरी शक्तिवृत्त वा अर्जुन अप्पादुराई र अरू विद्वान्हरूले भनेजस्तो ‘सेलुलर’ शक्तिवृत्तको रचना गर्ने र स्थापित शक्तिहरूजस्तो प्रशासन र शक्तिकेन्द्रहरूको प्रभावभन्दा भिन्न सिर्जनात्मक शक्तिको रचना गर्नुपर्छ भन्ने विचार बलियो भएको छ । कहीँ कतै सम्झौता नगरी नेपाली इतिहासका चुनौतीपूर्ण कालखण्डमा यस्तै सिद्धान्तलाई लिएर काम गर्ने रचना पत्रिका र यसका सम्पादक, प्रकाशक र सहयोगी साहित्यकारहरूको यो आधी शताब्दी नेपाली साहित्यको इतिहासमा एक महत्वपूर्ण युग हो ।’ रोचक घिमिरेको रचनाको अहिले पनि नियमित पाठक हुन पाउनुले मलाई एउटा युगको सम्झना गराउँछ । नगेन्द्र शर्मा त्यसरी नै ‘अभिव्यक्ति’ साहित्यिक पत्रिका निकालेर सक्रिय छन् । अच्युतरमण अधिकारीले ‘उन्नयन’ पत्रिका अनेक महत्वपूर्ण विशेषाङ्कसहित प्रकाशित गरी अहिले मात्रै बिसाएका छन् । उनको एक मात्र सहयोगी छाताले उनको साथ छाडेको देखिएको छैन ।
सत्र सालदेखि आधुनिक नेपाली साहित्यिक पत्रिकाहरूको एउटा नयाँ युग आरम्भ भएको थियो जस्को साहित्यिक पत्रिका ‘रूप–रेखा’ ले बलियोसँग प्रतिनिधित्व गरेको छ । बालमुकुन्द पाण्डे अनि पछि उत्तम कुँवरको ठूलो लगनशीलता र सम्पादनमा निस्केको यो पत्रिकाले नेपालको राजनीतिमा दबिएको स्वतन्त्र स्वरलाई साहित्यिक अभिव्यक्तिको माध्यम दिएको कुरा अलिकता लागेर अध्ययन गर्दा प्रस्ट हुन्छ । रचना र अरू केही समय निस्केर बन्द भएका पत्रिकाहरूको पनि त्यही भूमिका रहेको थियो । मेरो अनुभवमा अर्को पनि सन्जोग परेको भेटिन्छ । ‘रूप–रेखा’ को सय अङ्कको निम्ति सम्पादक उत्तम कुँवरले मलाई रूपरेखाको ऐतिहासिक ‘शारदा’ पत्रिकासँग तुलना गरेर एउटा लेख लेखिदिनु भने । मलाई यो विषय राम्रो लाग्यो अनि शारदाका केही नभेटिएका बाहेक सबै अङ्क पढेर ‘शारदा र रूपरेखा : दुई युगको प्रसङ्ग’ शीर्षकमा लामो लेख लेखें । त्यो लेख पछि साझाले छापेको मेरो किताब सिर्जना र मूल्याङ्कन (२०३९) मा परेको छ ।
सन् १९२५ सम्ममा भानुभक्त आचार्यको ‘रामायण’ २१ संस्करण छापिइसकेको समयदेखिको कथा हो, अहिले दार्जिलिङको भाषिक र पहिचानको आन्दोलन । छोटकरीमा, नेपाली भाषाको मात्र कथा होइन साहित्यिक पत्रिका, शक्ति र इतिहासको सम्बन्धलाई हामी कसरी हेर्छांै भन्ने कुरा हो । त्यो दिन मधुपर्कले त्यही सम्बन्धको गोधूलि केही मात्रामा भए पनि खोलेको थियो ।
प्रकाशित : असार १२, २०७४ ०८:४०